Click here to search detail via townships
မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ်ရှာကြည့်မယ်ဆို ဒီမှာနှိပ်ပါ
Shop Name or Food Category :
Township (မြို့နယ်) : Amarapura (အမရပူရ) Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ) Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ) Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်) Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ) Patheingyi (ပုသိမ်ကြီး) Pyigyitagon (ပြည်ကြီးတံခွန်)
Let's walk around Mandalay
69th Street, Between 34th and 35th Streets
Bo Aung Din (ဗိုလ်အောင်ဒင်)
09 402694510 , 09 792060803
63rd Street, Between 29th and 30th Streets
Mandalay Shwe Taung Tann
10:00am tto 10:00pm
30th Street, between 66th and 68th Streets
02 74982, 0973502664
67th Street, Between 30th and 31st Streets
02 74074, 09 977429 333, 09 977429 666
Corner of 33rd and 77th Street, Behind Diamond Plaza
71st Street, Between 32nd and 33rd Streets
30th Street, Between 64thand 65th Streets
Taiwan Hotpot (ထိုင်ဝမ်ဟော့ပေါ့)
09259172308, 09971159268, 092019313
11:00 am to 10:30pm
Kandawgyi Garden, Kandawgyi
View Shop	Formosa!
View Shop	Life Cafe
View Shop	One & Only
View Shop	Mr. Bar B.Q Restaurant & I T Tea House
About Mandalay Foods
Mandalay Foods ( www.mandalayfoods.com )
Mandalay Foods သည် မန္တလေးမြို့တွင်းနှင့် မန္တလေးမြို့အနီးရှိ စားသောက်ဆိုင်များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ရန်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အစားအသောက် Menu များကို အသေးစိတ် အလွယ်တကူကြည့်နိုင်ရန်၊ စားသောက်ဆိုင်များ၏ တည်နေရာ၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် Map Location တို့ကို အလွယ်တကူကြည့်နိုင်ရန်၊ လက်တလော Promotion ပေးထားသော ဆိုင်များကို ကြည့်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားသော web application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mandalay Foods ရဲ့ website လိပ်စာကတော့ www.mandalayfoods.com ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာနဲ့အသုံးပြုရေးဆွဲပေးထားတဲ့ tools များကြောင့် www. ကိုဖေျာက်ပြီး mandalayfoods.com ကိုလည်း တိုက်ရိုက် ရိုက်နှိပ်ပြီး Chrome, Mozilla, Opera, Safari အစရှိတဲ့ Browser များနဲ့ အခြား Web Browser များကို အသုံးပြုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Android ဖုန်းများအတွင် Android application ကို mandalayfoods.com မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Change Log and Font Encoding
Mandalay Foods ( www.mandalayfoods.com ) ကို 2015 December တွင် မန္တလေးမြို့ရှိ စားသောက်ဆိုင်များ အကူအညီဖြင့် စတင်တည်ထောင် ခဲ့ပါတယ်။ 2016 Noverber လတွင် Version2သို့ Update ပြုလုပ်ပြီး ပိုမိုအသုံးပြုရလွယ်ကူသော User Interface အသစ်သို့ပြောင်းလဲ့ခဲ့ပါတယ်။ 2017 May လတွင် Version3(Beta Version) သို့ဆက်လက် Update ပြုလုပ်ပြီး Walk around Mandalay feature နှင့် အခြား feature များထည့်သွင်းပြီး ပိုမိုအသုံးပြုရအဆင်ပြေအောင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
Font Encoding ပိုင်းမှာတော့ Unicode ကိုအသုံးပြုထားပေမယ့် HTML-5 support လုပ်တဲ့ ဘယ့် Device မှာမဆို font အမှန်နဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ Search box ရဲ့ Showing Font ကိုတော့ Zawgyi-One အသုံးပြုပေးထား ပြီး Data Saving ပိုင်းမှာတော့ Unicode ကော Zawgyi-One ကော အသုံးပြု ပေးထားတဲ့အတွက် ရှာချင်တဲ့ Keyword မှာ Unicode နဲ့ Zawgyi-One ထဲကဘယ် font နဲ့ပဲလာလာ အဆင်ပြေပါတယ်။
အပေါ်ပုံမှာပြထားတာကတော့ Main Search Box ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mandalay Foods ရဲ့ Major Component လဲဖြစ်ပါတယ်။ Main Search Box ကနေပဲ
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Keyword ရိုက်ထည့်ပြီးရှာနိုင်ပါတယ်။
မြို့နယ်အလိုက် အစားအစာ၊ စားသောက်ဆိုင် စတာတွေရှာချင်ရင်တော့ အပေါ်ပုံမှာပြထားတဲ့ နေရာကနေရှာလို့ရပါတယ်။
© 2017, Built by Juzz @STUDIOnine5 with LOVE
| Home | Categories	| View Mandalay	|